SHIRKII JALIYADA S/L YURUB EE (SSE) OO KA FURMAY MAGALADA UPPSALA EE DALKA SWEDEN | Toggaherer's Weblog
Sweden 21 March 2009 (THN)
Ururka kulmiya jaaliyadaha Somaliland ee Yurub (SSE) ayaa shalay kulan weyne uga bilowday magaalada UPPSALA ee waddanka Sweden. Kulanka waxa lagu qabtey dhismaha qadiimiga ah ee lagu magacaabo Wik- slott. Kullanka oo soconaya mudo saddex maalmood ah ayaa maanta qaybtii u horeysay bilaabantay. Waxa ka soo qayb galay:
– Wakiilo ka socda sideed urur oo ka mid ah waddamada Yurub oo ay ka mid yihiin Holland, Ingiriiska, Sweden, Denmark, Frans, Finland, Wales iyo Norway. Sidoo kale waxa ka soo qayb galey ergo ka timid dalka Kenya.
Waxa kale oo shirka ka soo qayb galey marti sharaf ka socdey Somaliland oo uu ka mid yahay wasiirka difaaca ee Somaliland.
Waxa nasiib wanaag ah in shirweynaha maallinta hore ee kulanka ay haddalo ka jeediyeen xubno dhowr ah oo ka socdey Dawlada Sweden iyo qaar ka mid ah ururada samofalka ee Yurub. Barnaamijka oo bilowdey maanta oo Jimcaha 11 duhurnimo.
Run ahaantii kulanka oo ahaa mid aad u xiiso badan waxa uu ku bilowdey Jawi diiran oo xiiso leh hadii aan waxyar ka tilmaamo barnaamijkii shirka ee maanta.
Ugu horeyntiiba kulanka waxa furey guddoomiyaha dalada ururada reer Somaliland ee Sweden Maxamed Xasan Waceys oo goobta ka soo jeediyey haddalo kooban oo soo dhoweyn ah isla markaana ka waramay xaalada guud iyo gaar ahaaneed ee dadka reer Somaliland ee Swden deggan. Wasiirka difaaca ee Somaliland mudane Cabdullahi Ali Ibraahim ayaa kalmad soo dhoweyn iyo dhiiri gelin ah goobta ka soo jeeediyay.
Intaa ka dib waxa haddalka la wareegay Guddoomiyaha dalada ururada reer Somaliland ee Yurub Cabdiraxmaan Cabdullahi Jibriil oo si kooban uga waramay ujeedada kulanka iyo sababaha keenay in la qabto kulan noocan oo kale ah.
Guddoomiyuhu waxa uu ka waramay taariikhda SSE iyo waxyaabaha u qabsoomay ururka gaar ahaana sannadihii u dambeeyay iyo weliba waxyaabaha la higsanayo. Guddoomiyuhu wuxuu si faahfaahsan uga hadlay faaiidada iyo muhima uu leeyahay kulanka noocan oo kale ah iyo baahida balaadhan ee loo qabo isfahan iyo wax wada qabsi midho dhal oo dhex mara ururada reer Somaliland ee Yurub iyo weliba xidhiidhka loo baahanyahay in lala sameeyo waddanka si markaa loo horumariyo wax wada qabsiga u dhaxeeya qurbo jooga reer Somaliland iyo waddanka.
Intaa ka dib waxa haddalka lagu soo dhoweeyay wakiilka Somaliland u fadhiya waddanka Sweden Caydaruus Sheekh Adan oo si kooban uga waramay doorka qurbo joogu uu ka qaadan karo dhismaha waddanka, gaar ahaan dhinacyada horumarka, adkeynta nabada iyo kobcinta dimuqraadiyad Somaliland ee curdinka ah.
Kulanka waxa haddal qiimo badan ka jeediyay xildhibaan Birgitta Ohlsson oo ka socota xisbiga lagu magacaabo (Liberal Party) isla markaana ah afhayeenka guddiga arrimaha dibada ee xisbiga. Marwo Birgitta waxay si qoto dheer uga warrantay muhimada ay leedahay faafinta iyo fidinta in dhibada loo taago lana kobciyo dhaqan dimuqraadi ah oo baahsan.
Sidoo kale waxay xustay muhimada iyo ahmiyada ay u leedahay in la helo doorasho xalaal ah oo si cadaalad ah loogu baratamo. Guubaabo ahaan waxay soo jeedisay in loo baahanyahay in Somaliland ay xidhiidh wacan la yeelato waddamada Afrika ah ee ahaya toobiyaha dimuqraadiyada oo xustay waddamada ay ka mid yihiin Koonfur Afrika iyoi Senegal.
Gabogabo ahaan waxay xustay in reer Somaliland looga baahanyahay in hore loo socdo lana xoojiyo dimuqraadiyada, furfurnaanta iyo arrimaha xuquuqda aadamaha.
Qaybtii labaad ee barnaamijka oo ku wajahnaa doorka ama kaalinta ay qurbo joogu ka ciyaari karaan arrimaha horumarka ee waddanka waxa ka hadlay dhowr qof oo weliba u soo bandhigey si cilmiyaysan.
Qaybtii hore ee gabogabada barnaamijka kulanka maanta waxa si faahfaahsan oo qoto dheer uga hadlay xaalada waxbarasho ee gabdhaha Somaliland Safiya Cawad oo ka timid waddanka Kenya. Waxay ka warantay baadhitaan la xidhiidha arrinkan oo si fiican sawir uga bixinaya xaalada tayo iyo tiro ee waxbarashada gabdhaha oo ah mid aad u liidata marka la barbar dhigo ta wiilasha. Safiya waxay goobta ka soo jeedisay baahida loo qabo in arrinkan la siiyo mudnaan gaara.
Kulanka waxa la soo gaba gabeeyey abaaro 19:00 waxaana lagu soo gabogabeeyay aqoon isweydaarsi ku wajahan qaabka jaaliyadaha dibadu ay ula noolaan lahaayeen waddamada ay joogaan isla markaana ula jaan qaadi lahaayeen la noolaanshaha bulshada ay la noolyihiin. Aqoon isweydaarsigan oo ahaa mid wakhti badan la geliyay waxa lagu soo bandhigay faraqa u dhaxeeya waddama Yurub.
Mohamed-amiin Siyaad Abdi